BBC Somali - Warar - Kenyan loo xukumey inay dacweyn karaan Britain
Kenyan loo xukumey inay dacweyn karaan Britain
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 5 Oktoobar, 2012, 13:40 GMT 16:40 SGA
xubnaha Mau Mau ee Kenya
Maxkamadda Sare ee London waxay go'aan ka gaartey kiiskan, oo la xiriira kacdoonkii dhaqdhaqaaqa Mau Mau ee 1950aadkii ka dhacay dalka Kenya, inkastoo waqtigii loo baahnaa sharciyan laga soo gudbey.
Xukunkan waxaa uu ka dhigan yahay in kiiskan haatan si buuxda loo dhegeysan karo.
Qareenada difaacayey saddexda ruux ayaa soo dhoweeyey xukunka maxkamadda waxayna ku tilmaameen inuu yahay mid taariikhi ah.
Dowladda Britain way qirsan tahay in ciidamadeeda ay jirdil u geysteen maxaabiis, laakiin waxay beenineysaa inay mas'uuliyaddeeda leedahay, waxayna sheegtey inay rafcaan ka qaadan doonto xukunkan.
Kumanaan reer Kenya ah ayaa la diley xiligii uu socdey kacdoonka Mau Mau ee ka dhanka ahaa maamulkii Britain ee Kenya sannadadii kontomaadka iyo lixdamaadka.
Dowladda ayaa horey ugu dooddey in dhamaan mas'uuliyadda jirdilka xiligii maamulka gumeysiga ay ku wareejisey Jamhuriyadda Kenya markii ay xornimada qaadatey 1963kii, isla markaana aan waxba loo raacan karin.